(Redirected from Makotorodzi)
VaFwe vanoti rwizyi (river) kureva rwizi.
VaNyakyusa vanoti ulwisi (river) kureva rwizi.
Izwi rokuti mronga (river) rinotaurwa kuTumbuka richireva rwizi.
VaTaita vanoti mweta (river) vachireva rwizi.
Vanotaura Kikongo vanoti kukula (to flow along, to flow down, run down as water, trickle, pour down, drift, roll down).
VaTonga vanoti mulonga (n. a river) vachireva rwizi.
VaTonga vanoti bulonga (n. a river system) vachireva mutandira werwizi.
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Rwizi&oldid=71889"
This page was last edited on 26 Kurume 2020, at 16:58.